Maro ireo olon-dratsy no tsy manam-po ny fisian'izy ireny any anaty tanàna ka mifanehitra tampoka amin'ny polisy toy ny tetsy Analamahitsy izay tra-tehaka teo am-pamakiana trano ny jiolahy iray. Toy izany koa ny jiolahy roa avy namaky trano tetsy Ambodivoanjo-Ambohimanatrika, nifanena tamin'ny polisy nanao fisafoana ka noraisim-potsiny. Jiolahy mitam-piadiana saika hanao fanafihana ihany koa no mbola nifanena tamin'ireo polisy tetsy Anjanahary ary dia voasambotra avokoa ireo olon-dratsy miisa telo. Sombiny amin’ireo vokatra azon’ny polisim-pirenena ireo ka ny tanjona dia ny fanampiana sy ny fanakaikezana hatrany ny vahoaka. Ho an’ny besinimaro izay mety ho tratra hariva moa dia tsara hatrany ny tsy misaraka amin’ny kara-panondro hisorohana ny olana mety hitranga. Tsy misangy mantsy ny polisy fa avy hatrany dia miditra violon.